Alahady fahadimy amin’ny Karemy – 22/03/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Te hihavana amintsika Andriamanitra.
Ety am-pihandohana dia tsara ny mampatsiahy antsika fa amin’ny heriny androany dia hankalazaintsika ny nahatongavan’I Jesoa sy nandraisana Azy am-boninahitra tao Jerosalema izany hoe ny SAMPAKAZO. Ary io no andro farany nidirany tao farany.
Niara-nakalaza izany ny olon-drehetra na ny mpino na ny tsy mpino satria nalaza izany. Fa tamin’ireo tsy mpino ireo dia nisy rangahy anankiray , Jentily, izany hoe tsy mpino, teratany Grika izy io, naniry mafy ny hahita an’I Jesoa . Mba hahafahany manao izany dia nanatona an’I Filipo izy, satria ity farany mahalala ny fombafomba Grika. Dia I Filipo avy eo no nilaza izany tamin’I André, raha nilazàn’ilay Jentily hoe “tompoko, te hahita ny Tompo izahay”.
Ezaka roa no tsara tanterahintsika raha tena Kristianina Katôlika isika:
Mahay mihavana isika samy isika:
Manao ahoana ny fomba fandraisantsika vahiny?
I Md Paoly dia nilaza fa tsy tokony atao tsinontsinona ny vahiny satria amin’izy ireny koa ny endriky Jesoa . Raha tsy mahay misokatra amin’ny hafa isika dia tsy hahazo zava-baovao mihitsy. Andriamanitra koa dia maniraka antsika hitaona ny namantsika hanantona an’I Jesoa , maro mantsy ireo mety mangetaheta fa tsy mahafantatra izay tokony hatao. Ka manana andraikitra isika hisava lalana ho an’ireo namantsika.
Any anaty fiaraha-monina any matetika misy ny vahiny, mangetaheta saingy mila ny fitarihantsika izany, ka tokony haka tahaka ny nataon’I Filipo sy André isika: tsy manavaka ary mahay mandray vahiny.
Mahay mihavana amin’Andriamanitra :
Raha mitondra fiovàna ny vahiny ho antsika dia mila mahay mandray izany isika sao mahasoa ny Fiangonantsika .Anisany endrika iray mety hihavanantsika amin’ny Ray izany satria mety hampiroborobo ny Fiangonana . Efa voalaza mantsy fa amin’izy ireny misy endrik’Andriamanitra ka ilaina isika kristianina mahay mampihantrano ireo vahiny. Maro ny endrika mety hisehoan’ireo vahiny ireo : na avy any amin’ny hafa finoana izy ireo ka te hiverina aty amintsika na ireo nania noho ny fiainana tia rendrarendra. Mampitombo ny voninahitr’Andriamanitra ny fitarihantsika ny mpiara-belona ho ao amin’ny fiangonana hanantona an’Andriamanitra. Amin’izay fotoana izay, dia mihavana amin’Andriamanitra isika satria manao toy ny nataon’i Filipo sy i André.
Araka izany, tsara isika manao ezaka amin’izao hakatoky ny Paka izao, mitaona olona farafahakeliny iray hiverina ao am-balan’ny Tompo ka hivavaka indray, na very tany amin’ny finoana inona izy na inona, na inona fanotàna vitany na inona. Ny zava-dehibe dia ny fiverenany ho Katôlika rehefa avy niriaria tany an-kafa. Mety manana fianakaviana isika, na namana na mety ho mpiara-monina tsotra, hentàno izy ireo. Ekena fa mety tsy hitovy ny fomba hitarihantsika azy ireo, fa fantaro tsara izy ary mitadiava fomba hitarihana azy. Fan a isika izao aza dia hahazo valisoa goavana rahatrizay fa tsy mampanenina ny manao izany. Tsaraho fantatsika mantsy fa tsy mora ny manara-dia an’I Kristy, na isika aza indraindray mety ho solofaka, ka indrindra moa ireto namantsika lasa ivelan’ny vala?
Mandrita izao herinandro farany alohan’ny hidirana amin’ny karemy izao ary dia mila miezaka mihavana amin’ny namantsika isika fa indrindra mla mihavana amin’Andriamanitra satria IZY dia te hihavana amintsika lalandava.